Yɛda wo ase sɛ woagye bere akenkan saa nhomawa yi ama woahu sɛnea Yehowa Adansefo te, yɛn dwumadi ahorow, ne sɛnea yɛn ahyehyɛde no reyɛ adwuma. Yegye di sɛ aboa wo ma woahu sɛ yɛn na yɛreyɛ Yehowa apɛde nnɛ. Yɛhyɛ wo nkuran sɛ kɔ so sua Onyankopɔn ho ade, ka nea woresua no ho asɛm kyerɛ w’abusuafo ne wo nnamfonom, na wo ne yɛn mmɔ fekuw wɔ yɛn Kristofo nhyiam ase daa.—Hebrifo 10:23-25.
Wubehu sɛ dodow a wusua Yehowa ho ade no, dodow no ara na wubetumi ahu sɛnea ɔdɔ wo ankasa. Afei, ɛno bɛka wo ma woayɛ nea wubetumi biara de akyerɛ sɛ wo nso wodɔ no. (1 Yohane 4:8-10, 19) Nanso, dɛn na wubetumi ayɛ wɔ w’asetenam da biara da de akyerɛ sɛ wodɔ no? Dɛn nti na ne mmara a ɛfa abrabɔ pa ho a wode bɛyɛ adwuma wɔ w’asetenam no bɛma asi wo yiye? Dɛn na ɛbɛboa wo ma w’ani agye ho sɛ wo ne yɛn bɛbom ayɛ Onyankopɔn apɛde? Nea ɔne wo sua Bible no ani begye ho sɛ ɔne wo bɛbom ahwehwɛ nsɛmmisa yi ho mmuae sɛnea ɛbɛyɛ a wo ne w’abusua betumi de ‘mo ho asie Onyankopɔn dɔ mu akɔ daa nkwa mu.’—Yuda 21.
Yɛde anigye hyɛ wo nkuran sɛ kɔ so sua nhoma a edi hɔ no na nya nkɔso wɔ nokware no mu.